गैसीय ग्रहहरु: विशेषताहरु, रचना र वर्गीकरण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामीलाई थाहा छ कि सौर्य प्रणाली यो विभिन्न प्रकारका ग्रहहरू मिलेर बनेको छ जसको विशेषताहरू र रचनाहरू भिन्न छन्। त्यहाँ छन् वायु ग्रहहरू जुन ग्यास दिग्गजको रूपमा चिनिन्छ र यो ठुलो ग्रह बाहेक अरु केहि छैन जुन मुख्यतया हाइड्रोजन र हीलियमजस्ता ग्यासहरूको मिलेर बनेको हुन्छ तर यसको तुलनात्मक रूपमा सानो चट्टान कोर हुन्छ। अन्य चट्टानी ग्रहहरू जस्तो छैन जुन पूर्ण रूपमा चट्टानहरू र गैसियस वातावरणको साथ बनेको छ, यहाँ ग्यासको अधिक मात्रा रहेको छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई ग्यासिय ग्रहहरूको सबै सुविधाहरू, भिन्नता र जिज्ञासाहरू बताउन जाँदैछौं।
1 गैसीय ग्रहहरू के हुन्
2 तिनीहरू के हुन्?
3 वायु ग्रहहरूको विशेषता
4 चट्टानी ग्रहहरू भन्दा फरक
गैसीय ग्रहहरू के हुन्
पहिलो नजर र नामबाट, यस्तो लाग्न सक्छ कि हामी बल वा ग्याँसको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। हामी केवल एउटा यस्तो ग्रहको बारेमा कुरा गर्दैछौं जसको कोर चट्टान हो तर बाँकी रहेको ग्रह ग्यास हो। यी ग्याँसहरू प्राय: मुख्य रूपमा हाइड्रोजन र हीलियम हुन्छन्। हामीसँग सौर्य प्रणाली बनाउने गैसियस ग्रहहरू मध्ये बृहस्पति, स्याटर्न, यूरेनस y नेप्च्यून। यी gas ग्यास विशाल ग्रहहरूलाई जोभियन ग्रहहरू वा बाहिरी ग्रहहरू पनि भनिन्छ। तिनीहरू ती ग्रहहरू हुन् जुन हाम्रो सौर्यमण्डलको बाहिरी भागमा रहेको छ जुन मंगल ग्रहको ग्रह र ग्रहहरू भन्दा टाढा छन्।
जबकि बृहस्पति र शनि सबैभन्दा ठूला वायु ग्रहहरू छन्, यूरेनस र नेपच्यूनको संरचना केही फरक छ विशेष सुविधाहरूको साथ। जब हामी गैसियस ग्रहहरूको बारेमा कुरा गर्छौं तब हामी देख्छौं कि ती मुख्यतया हाइड्रोजनबाट बनेका छन् र यसैले, जुन मूल सौर नेबुलाको संरचनाको प्रतिबिम्ब हो।
तिनीहरू के हुन्?
हामी सूचीमा जाँदैछौं जुन हाम्रो सौर्यमण्डलको मुख्य वायु ग्रहहरू छन्:
बृहस्पति: यो सम्पूर्ण सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठूलो ग्रह हो। यो एउटा कारण यो हो कि यसलाई विशाल ग्रहको नामले चिनिन्छ। यसको मुख्य संरचना हाइड्रोजन र हीलियम हो जुन चट्टान र बरफको बाक्लो कोर वरिपरि छ। धेरै ठूलो भएकोले यसको विशाल चुम्बकीय क्षेत्र रहेको छ र ना naked्गो आँखाले देख्न सक्ने छ। पृथ्वीबाट हामी देख्न सक्छौं कि रातो रंगको धेरै उज्यालो तारा जस्तो देखिन्छ र त्यो बृहस्पति हो। तिनीहरूको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो रातो दाग तिनीहरूसँग वातावरणको ठूलो चाप र उच्च बादलहरूको कारण।
शनि: शनि ग्रहको मुख्य विशेषता यसको ठूलो छल्ले छ। यो 53 XNUMX ज्ञात चन्द्रमाहरु छ र मुख्य रूप बाट हाइड्रोजन र हीलियम बाट बनेको छ। अघिल्लो ग्रहको साथ उही चीज हुन्छ, यी सबै ग्याँसहरू एक घन चट्टान कोर वरिपरि छन् जसको संरचना समान छ।
यूरेनस: यो एक मात्र ग्रह यसको छेउमा झुकाव छ। यो एक हो जुन प्रत्येक ग्रहको सम्बन्धमा पछाडि घुम्दछ। यसको वातावरण हाइड्रोजन र हीलियम मिथेन मिलेर बनेको छ। यसले bit 84 पृथ्वी बर्षमा आफ्नो कक्षा पूरा गर्दछ र main मुख्य उपग्रहहरू छन्।
नेप्च्यून: यसको वातावरणको संरचना यूरेनससँग मिल्दोजुल्दो छ। आजको १ to वटा पुष्टि चन्द्रमाहरू छन् र धेरै व्यक्तिहरूले १ 13 मा पत्ता लगाएका थिए। यसको कक्षा एकदम सुस्त छ किनकि यो लगभग गोलाकार छ र सूर्य को वरिपरि जान १ 1846 पृथ्वी बर्ष लाग्छ। तिनीहरूको घुमाउने अवधि करिब १ 164 घण्टा हो। यसको पनि युरेनससँग यस्तै संरचना छ।
जब यो गैसियस ग्रहहरूको वर्गीकरणको कुरा आउँछ, यो उल्लेख गरिनु पर्छ कि यी ग्रहहरूको संरचना र संरचनामा फरक भएको कारण तिनीहरू पनि तिनीहरू बीच भिन्न छन्। बृहस्पति र शनिलाई ग्यास राक्षसहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जबकि यूरेनस र नेप्च्यून आइस राइन्टहरू हुन्। सूर्यबाट तिनीहरू टाढा सौर्यमण्डलको दूरीको कारणले गर्दा उनीहरूसँग केन्द्रक चट्टान र बरफले बनेको छ।
वायु ग्रहहरूको विशेषता
अब हामी हेरौं कि यी वायु ग्रहहरूलाई परिभाषित गर्ने मुख्य विशेषताहरू के हुन्:
तिनीहरूसँग राम्रो परिभाषित सतह छैन। किनकि कोर मात्र ढु rock्गाको चीज हो र बाँकी हो योसँग पूर्ण परिभाषित सतह छैन।
तिनीहरू ग्यासको विशाल विशाल समूहबाट बनेका छन् जहाँ मुख्यतया हाइड्रोजन र हीलियम प्रशस्त हुन्छन्।
जब वैज्ञानिकहरूले व्यास, सतह, खण्डहरू र यी ग्रहहरूको घनत्वलाई जनाउँछन् तिनीहरू बाहिरी खोलको सम्बन्धमा बनाइन्छ जुन बाहिरबाट देखिन्छ।
वायुमण्डल धेरै घन हुन्छन् र यो कारण यो हो कि ग्रहहरु मा ग्यासहरु जारी रहन्छ र बाँकी ब्रह्माण्डमा फैलदैन।
सबै तिनीहरूसँग उपग्रह र रिंग प्रणालीको एक ठूलो संख्या छ।
यो Jovian ग्रहहरु को नामले चिनिन्छ किनकि तिनीहरुका आकार र बृहस्पति जस्तै विशेषताहरु छन्।
यसको घनत्व कम छ र यसको कोर धेरै चट्टानी छ। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यसको संरचना प्राय: ग्याँस भएकोले यसको घनत्व धेरै कम छ। अर्कोतिर, केन्द्रक अधिक घन छ।
जब प्रकाशको छाँटकाँट रकम प्राप्त गर्दछ यससँग एकदम कम तापमान हुन्छ। सबैभन्दा चिसो ग्रह नेप्च्यून हो।
तिनीहरू १० घण्टाको औसत रोटेशनको साथ छिटो घुमाउँदछन्। यद्यपि सूर्यको चारै तिर यसको अनुवादित गति धेरै ढिलो छ।
यसको चुम्बकीय र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रहरू धेरै शक्तिशाली छन् र यो कारण यो हो कि तिनीहरूले ग्यासहरूको जनसंख्या कायम गर्न सक्दछन्।
वातावरण र मौसम ढाँचा ती सबै बीच बिल्कुल समान छ।
चट्टानी ग्रहहरू भन्दा फरक
चट्टानी ग्रहहरूको सम्बन्धमा हामीले देख्ने मुख्य भिन्नताहरूमध्ये यो हो कि गैसियस ग्रहहरू मुख्यतया हाइड्रोजन, हीलियम र मिथेन मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो चट्टानको अन्य ग्रहहरु जबकि, तिनीहरू मुख्यतया ग्याँसहरु बाट बनेको छ। चट्टानी ग्रहहरूको प्रायः ठोस सतह हुन्छ र चट्टानहरूले बनेको हुन्छ।
अर्को प्रमुख भिन्नता भनेको चट्टानी ग्रहहरूको सतह राम्रोसँग परिभाषित गरिएको छ। चट्टानी ग्रहहरूको माध्यमिक वायुमंडल छ जुन आन्तरिक भूगर्भीय प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको छ, जबकि चट्टानी ग्रहहरू गैसियस ग्रहहरूको प्राथमिक वायुमंडल हुन्छ जुन मूल सौर नेबुलाबाट सीधा क्याप्चर गरिएको छ। यी ग्रहहरू मानव टेक्नोलोजी दिएर अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन हुँदैछन्।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले ग्यासयुक्त ग्रहहरू र उनीहरूका विशेषताहरूका बारे अझ बढी जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » गैसियस ग्रहहरू
सम्भावित उर्जा के हो